admin, Author at Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
August 29, 2019adminUpcoming events
Inle Thadingyut Lighting and Music Festival 2019
ICHT- Khit San Yin Weaving Center and MNTV channel aim to celebrate Thadingyut lighting and music show festival in Inle lake such as activities Traditional Boat rowing competition Floating lighting and Music show CULTURE BOX SHOW (12/13.10.2019) POP MUSIC NIGHT (12.10.2019) ROCK MUSIC NIGHT(13.10.2019) The event will be started from 9th October to 13th October 2019.its...
August 26, 2019adminAnnouncements
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန “ကြိုဆိုပါသည် မြန်မာပြည်” ရောင်စုံဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ
၁။ ပြိုင်ပွဲခေါင်းစဉ်နှင့်ဆုကြေး ပြိုင်ပွဲခေါင်းစဉ်နှင့် လျော်ညီစေရေးတွက် မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားရှိ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရိုက်ကူးထားသောခရီးစဉ် ဒေသပုံများ၊ ရိုးရာပွဲတော်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံ များဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တိုးတက်လာမည့် ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် မြန်မာပြည်၏ခရီး စဉ်ဒေသများကို ဖော်ထုတ်လိုခြင်းဖြစ်ပြီး ဆုများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းသတ်မှတ်ပေးသွား မည်ဖြစ်ပါသည်- (က) ပထမဆု ကျပ်(၇)သိန်း (၁)ဆု (ခ) ဒုတိယဆု ကျပ်(၅)သိန်း (၁)ဆု (ဂ) တတိယဆု ကျပ်(၃)သိန်း (၁)ဆု (ဃ) နှစ်သိမ့်ဆု ကျပ်(၁)သိန်း (၁၅)ဆု စုစုပေါင်း (၁၈)ဆု ၂။ ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းချက်များ (က) ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးသည် (၁၂x၁၈)လက်မအရွယ် ဓာတ်ပုံများကို အများဆုံး(၁၀)ပုံတင် သွင်းနိုင်သည်။ ယှဉ်ပြိုင်သည့်ပုံနှင့်အတူ (၄x၆)လက်မအရွယ် CD (72 dpi) အား တစ်ပါတည်းတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။...
August 23, 2019adminNews
Bringing tranquility back to Shan State
August 22, 2019, Ministry of Hotels & Tourism, Nay Pyi Taw: The serenity of the scenic hill town of Pyin Oo Lwin Township and Naung Cho Township has returned after attacks in the two townships. The Ministry of Hotels and Tourism, under the directorate of the Deputy Director U Thet Lin and assistant director U...
August 19, 2019adminNews
State Counsellor attends opening ceremony of ASEAN Food Festival 2019 in Mandalay
State Counsellor attends opening ceremony of ASEAN Food Festival 2019 in Mandalay STATE Counsellor Daw Aung San Suu Kyi attended the opening ceremony of the ASEAN Food Festival 2019 held at the Mandalay Convention Centre and launched the event by cuttingaceremonial ribbon. State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, Vice President U Henry...
August 15, 2019adminAnnouncements
ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ Digital Marketing လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုမည့် ဘာသာပြန် ဆိုခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၅)ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ Digital Marketing လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ရုရှား၊ စပိန်၊ ဂျာမဏီ၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ ဟိန္ဒီဘာသာစကားများသို့ ဘာသာ ပြန်ဆိုခြင်းလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ၃၀-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၁၃-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့ အထိ တစ်ဘာသာချင်းအလိုက် အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ ကုမ္ပဏီ (၄)ခုမှ အဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းခဲ့ပါ သည်။ ၂။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာများကို ၁၃-၈-၂၀၁၉ နေ့လယ် (၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ဝန်ကြီးဌာန၊ နီလာခန်းတွင် တင်ဒါကော်မတီဝင်များ၊ အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းသူများ၏ ရှေ့၌ တင်သွင်းထားသည့် ဈေးနှုန်းများကို...
ခရီးစဉ်ဒေသဆိုင်ရာ Video များ စုစည်းရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုမည့် ခရီးစဉ်ဒေသများနှင့် ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုဆိုင်ရာ Video များ စုစည်းရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် စိတ်ပါဝင်စားသော ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် တင်ဒါဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာများ လာရောက်တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် – (က) တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် – ၁၅-၈-၂၀၁၉ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) (ခ) တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ – တင်ဒါပုံစံများကို တစ်စောင်လျှင်၁၀၀၀၀/-ကျပ် (တစ်သောင်းကျပ်)နှုန်းဖြင့် e-Government Office၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၃၃)၊ နှင့် တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ နေပြည်တော်တွင် ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင် ပါသည်။ (ဂ) တင်ဒါလျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် – ၂၉-၈-၂၀၁၉...
July 31, 2019adminNews
Ministry launches www.tourisminmyanmar. com.mm to facilitate vibrant tourism in emerging ASEAN Nation
Nay Pyi Taw, 31 August THE Ministry of Hotels and Tourism (MOHT) is launchedanew portal www.tourisminmyanmar.com.mm as part of its efforts to reach travellers seekingaunique Asian experience. As tourism is an important economic feature with its activities contribute significantly to any country’s development goals, generating income and employment for its people,...
July 31, 2019adminAnnouncements
MINISTRY OF HOTELS & TOURISM LAUNCHES WWW.TOURISMINMYANMAR.COM.MM TO FACILITATE VIBRANT TOURISM IN THE EMERGING ASEAN NATION Press Release
NAY PYI TAW, Wednesday, 31st July 2019: The Ministry of Hotels and Tourism (MOHT) today launchedanew portal www.tourisminmyanmar.com.mm as part of its efforts to reach travellers seekingaunique Asian experience. As tourism is an important economic feature with its activities contributing significantly to any country’s development goals, generating income and employment for...
July 30, 2019adminAnnouncements
ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ Digital Marketing လုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုမည့်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေး ဆိုင်ရာ Digital Marketing လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ရုရှား၊ စပိန်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှားနှင့် ဟိန္ဒီဘာသာများသို့ ဘာသာပြန်ဆို ခြင်းများအတွက် လုပ်ငန်းအပ်နှံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ တစ်ဘာသာချင်းစီအလိုက် တင်ဒါဈေးနှုန်း အဆိုပြုလွှာများ လာရောက်တင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- (က)တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်နေ့ရက် – ၃၀ – ၇ – ၂၀၁၉ ရက် (အင်္ဂါနေ့) (ခ) တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာနှင့်အချိန် – တင်ဒါပုံစံများကို တစ်စောင်လျှင်၅၀၀၀/-ကျပ် တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ(ငါးထောင်ကျပ်) နှုန်းဖြင့် e-Government office ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၃)၊ နေပြည်တော်၌ ရုံးချိန်နံနက်(၉:၃၀)...
July 15, 2019adminAnnouncements
ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်၊ စာတမ်း၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည့်လုပ်ငန်းအတွက် Expression of Interest – EOI ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ခရီးစဉ်ဒေသနှင့် ခရီးသွားမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်၊ စာတမ်း၊ လက်ကမ်းစာစောင်များကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အတွက် လုပ်ငန်းအပ်နှံဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ကုမ္ပဏီများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် Expression of Interest – EOI တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ၂။ Expression of Interest-EOI Form များအား အောက်ပါအတိုင်းထုတ်ယူနိုင်ပါသည်- (က) EOI Form စတင်ထုတ်ယူနိုင်သည့်ရက် – ၁၅-၇-၂၀၁၉ ရက်(တနင်္လာနေ့) (ခ ) EOI Form တင်သွင်း ရမည့်နေရာ – ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၃)၊ နေပြည်တော်၌ ရုံးချိန် နံနက်(၉:၃၀) နာရီမှ ညနေ (၄:၃၀) နာရီအတွင်း (ဂ )...